Facebook page များ User account လို ဖြစ်သွားတော့မည်။ | Online Service Center Myanmar -->
Facebook page များ User account လို ဖြစ်သွားတော့မည်။
1. Facebook user account design မျိုးဖြစ်သွားမည်။
2. Account နဲ့ Page ကို Switch profile လုပ်သုံးလို့ရမည်။
3. Messenger app ကို Page နဲ့ Switch လုပ်သုံးလို့ရမည်။( ရတာတော့ကြာနေပြီ။ )
4. Like button အစား Follow button ပြောင်းလဲသွားမည်။
5. အခြား Facebook user account တွေလို Follow လုပ်ထားတဲ့ user account ‌တွေ၊ Page တွေက တက်သမျှကိုမြင်တွေ့ရနိုင်မည့် News Feed လည်းပါလာပါမယ်။
6. Page အနေနဲ့ အခြား Facebook account တွေကို Follow လုပ်လို့ရမည်၊ Like, Comment, Share တွေလုပ်လို့ရမည်။
7. Page to Page အချင်းချင်း Follow, like , comment, share တွေလုပ်လို့ရမည်။
8. Facebook user account တွေလို info တွေဖြည့်လို့ရမည်။
9. Facebook account မှာလို Featured photo ‌တွေထည့်လို့ရမည်။
10. Add Hobbies တွေလုပ်လို့ရမည်။
11. ယခင်က Page admin ကိုယ်တိုင်က Country location access ကို Accept လုပ်ပေးမှ Record ဖြစ်ပြီး Page Transparency မှာဝင်ကြည့်ရင် ဘယ်နိုင်ငံက ဘယ်နှယောက်ဆိုပြီးတွေ့ရပေမယ့် နောက်ဆို Accept လုပ်လုပ်၊ မလုပ်လုပ် အလိုလျောက် ဘယ်သူဝင်ကြည့်ကြည့် Page မှာ Admin ဘယ်နှယောက်ရှိပြီး၊ ဘယ်နိုင်ငံက ဘယ်နှယောက်ဆိုတာမျိုးပါ အတိအကျပြပေးထားပါလိမ့်မယ်။
ကဲ... ဒီလောက်ဆို Business Page တွေက User account ပုံစံမျိုးပြောင်းသွားတော့မှာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကြမ်းဖျဉ်းတော့သိသွားလောက်ကြပြီထင်ပါတယ်။
Page New Design မှာ နောက်ထပ်လည်း အများကြီးကျန်သေးသလို၊ ထပ်တိုးလာဖို့တွေလည်းရှိပါတယ်။
အခုတော့ ဒီပို့စ်ကို ဒီလောက်နဲ့ပဲ ရပ်နားလိုက်ပါပြီ။
Aung Kyaw Soe ( 4.12.2020 - 4:17 PM )